Read More / Sii akhri Entrepreneur & Pioneer (CEO.Garaad Khaliif Nuur) Iyo Mashruuca Cusub Ee "Al Noor Twin Citys Djibouti And Yeman".
19 Mar 2011 (TL) Intii sabanadaan ahayd, amaba aan iraahdo 20-kii sanadood ee ugu danbeyey waxaa beecmushtariga soomaaliyeed ku soo kordhay nooc cusub oo ganacsiga wixii aynu (Gaado) u niqiin ah, amase gedislaha jeebka buuran ee xoolaha iyo hargaha gata waqtiga aysan ganacda lahayn. si uu uga macaasho marka ay ganac yeeshaan. beecmushtarka cusbu ee gaado'da soomaaliyeed "Somali Entrepreneurs" waxay uga duwanyihiin gaado'dii hore waa heer caalami. waxayna gaado'da caalamka kala midyihiin macaamilka iyo habka ay u ganacsadaan, halka ay gaado'dii hore ee soomaaliyeed ay lahaan jireen habdhaqan ganacsi iyo macaamil soomaalida u gooniya. Waraysiga Telefishinka qaranka ee dalka jabuuti (RTD) uu ku waraystay (Sheikh Tarek bin Laden) (Garaad Khaliif Nuur) waa mulkiilaha shirkaddii labaad ee isgaarsiinta oo geyiga soomaaliyeed laga aas-aaso. shirkad daas oo ah shirkadda isgaarsiinta ee (Galkacyo Telecom Corporation "Galkom"). shirkadda isgaariinta ee (Galkom) waxaa la aas-aasay sanadkii (1997) halka shirkadda (Telecom Somalia) la abuuray 1994. sanooyin badanna shirkadda (Galkom) waxay ahayd shirkadda isgaarsiinta ee ugu macaamiisha badan gobolka mudug. xarunta shirkadda ee daarta (Guryasamo) waxay ahayd mudo dheer xarunta ganacsi ee ugu muhiimsan oo ku taala magaalada Galkacyo. Garaad Khaliif Nuur wuxuu kaloo kamid ahaa sadexdii nin ee ugu horeeyey oo magaalada Galkacyo hoteel sadex dabaq ah ka taaga. Bin Laden bridge by CNN_International (Garaad Khaliif Nuur) isaga oo maalqabeen weyn ah ayuu wuxuu madax u noqday shirkadda iskaashatada hantiileyaasha beesha (Reer Faarax) sanadkii 1998, iskaashatadaas oo markaas ka mid ahayd 3-da iskaashato ee ugu waaweyn iskaashatooyinka hantiileyaasha reer Tanadland. (Garaad Khaliif Nuur) madaxa shirkadda hantiileyaasha (Bab Al Iman) "Bab Al Iman Hedge Fund Manager" intaanu noqon, shirkadda (Galkacyo Telecom Corporation "Galkom") waxay horay xarumo isgaarsiineed ugu lahayd magaalooyinka Galkacyo iyo Galdogob. waxayna dhul ka iibsatey magaalada buurtinle ee gobolka nugaal oo ay rabtey in ay xarun isgaarsiineed ka furato. shirkadduna waxay ahayd shirkad aad ugu hanweyn in ay geyiga soomaaliyeed oo dhan ku fido. Al Noor City Djibouti Alarabyia report:- (Garaad Khaliif Nuur) oo ah nin hindise fiican kuna wanaagsan hawlaha qorsheynta mudadii uu madaxa shirkadda (Tawakal Express) ahaa, shirkaddu waxay noqotay shirkad balaaran oo labo farac ah. Waxuuna shirkadda (Tawakal Group) ku soo xiray saamiley badan iyo labo shirkaddood oo hantiileyaal saamiley ah. farca dhismaha ee shirkadda (Tawakal Group) oo ah (Tawakal Realstate) intii uu garaad madaxa shirkadda ahaa, waxay noqotay shirkadda dhismaha ee ugu balaaran oo bariga afrika laga leeyahay. halka faraca 1-aad ee shirkadda oo ah (Tawakal Express) ay ka mid tahay labada xawaaladdood ee ugu weyn xawaaladaha soomaaliyeed. shirkadda (Tawakal Express) waxay warbaahinta horay uga sheegtay in ay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba xarumo bangiyo ah ay ka furanayso. Taasina wax sidaas u buuran maaha marka laga hadlayo shirkad (Tawakal Express) baaxaddeeda leh. kaba soo qaad in ay 10 magaalo oo dalka iyo dibeddiisaba ku yaal ay bangiyo ka dhisaan, xaruntiina ay ku kacdo qarash ah $1.5 milyan. marka mashruuc qarashkiisu uu yahay $15 milyan waa mashruuc yar. Ha'yeeshee, (Garaad Khaliif Nuur) waxaa horyaala hawl hadba sida uu u maareeyo ay saamayn weyn ku yeelan doonto mustaqbalka shirkadda (Tawakal Group) iyo sumcaddiisa gudoomiyenimo. qaasatan faraca dhismaha oo ah qaybta ugu macaash-celinta badan, lagana yaabo in shirkadda (Somgluf Group) oo tartan ba'an kula jirta ay dhaafto. shirkadda dhismaha ee (Tawakal Realstate) hada waxay ebidey qaybtii ay ku lahayd mashruuca (Emirates City), waxayna isu diyaarinaysaa mashruuca xigi doona oo ah mid ka mid ah dhismeyaasha magaalooyinka mataanaha ah ee " Al Noor Twin Citys" taas oo ah magaalada laga dhisayo daanta xeebta Jabuuti. Labada shirkaddood ee (Somgluf Group) iyo (Tawakal Realstate) waxay qayb libaax ka soo qaateen oo u qabsoomay mashruuc (US$ 4.1 billion) qarashkiisa lagu sheegay. maamul goboleedka ugu yar maamulada bahwadaagta ah (Arab Emirates) oo ah Ajman-na ah mashruuca ugu weyn ee laga hirgeliyey. ayna ku faanaan in mashuurca (Emirates City) uu yahay mashruuca ugu badan daaraha dheer-dheer oo dunida laga hirgeliyo kii ugu horeeyey. marka hada ahna waxay u xayd-xaydanayaan dhismaha magaalada (Al Noor City1) oo laga dhisayo daanta xeebta Jabuuti. mashruucaas oo sida la odorosay ku kicidoona US$20 billion. mashuuca "Al Noor Twin Citys Djibouti And Yeman" ayaa wuxuu ka kooban yahay labo qaybood, oo kala ah buundada 2-aad ee aduunka ugu dheer (Tarek bin Laden bridge) oo u dherer keedu yahay 29 km (18 ml). iyo labo magaalo oo laga kala dhisayo labada daan ee marinbiyoodka "Bab al-Mandab". Labada shirkaddood ee (Somgluf Group) iyo (Tawakal Realstate) ayaa waxay qayb ka yihiin urur shirkaddo soomaaliyeed ah oo u cadad koodu marba marka ka danbaysa sii kordhayo, Loona aas-aasay in ay difaacaan sumcadda iyo sharafta ganacsatada soomaaliyeed iyo tan qaaradda afrikaba. isuna kaashaday inay ka faa'iideystaan dhismaha magaalada taariikhiga ah ee (AL Noor City). iskaashatada shirkaddaha soomaaliyeed ee (Al Rayaan Realstate) oo loogu magacdaray mid ka mid ah 8 sideeda albaab ee janada, oo ah albaabka ay janada ka galaan saa'imiintu ayaa la filayaa in ay qayb libaax ka qaadato dhismaha mashruuca (Al Noor City). iskaashato shirkaddeedka (Al Rayaan) ayaa waxay qayb ka tahay urur weynaha maalgeliyeyaasha soomaaliyeed. Maamulaha guud ee shirkadda (Middle East Development LLC) (Sheikh Tarek Bin Laden). (Somgluf Group) oo horay dalka Tanzania ugu lahayd wershad alwaaxda jar-jarta una dhoofisa wadanka isutaga imaraadka carabta, waxaa hada soo baxay war sheegaya in ay heshiis kula gashay dawladda Tanzania qandaraas dhoofinta shamiitada. shirkadda (Middle East Development LLC) oo ah shirkadda 3-da mashruucba maamulaysa ayaa waxay maalgelinaysaa buundada (Tarek bin Laden bridge) 100%. labada mashruuc ee dhismaha magaalooyinka mataanaha ah ee laga kala dhisayo wadamada jabuuti iyo yaman iyagana intiisa badan waxaa maalgelinaya (Middle East Development LLC). balse labada wadan ee jabuuti iyo yaman waxaa loo ogolyahay in ay mashruuca wadamadooda lagu dhisayo saami in alla iyo inta ay ka qaadan karaan ay ka qaataan. Maareeyaha shirkadda (Noor City Development Corp) (Eng.Tariq E. Ayyad). Hase ahaatee, bil shardi waxaa ah wadamada yaman iyo jabuuti in ay abaabulaan maageliyeyaasha iyo shirkadaha dhismaha ee ka qayb qaadanaya mashaariicda "Al Noor Twin Citys Djibouti And Yeman". inta aysan soo dhawaan bilowga mashruucana ay cadeeyaan mashruuca qaybta ay ka qaadanayaan. sida caadiga ah waxaa laga rabaa shirkaddaha dhismaha in ay lacag curaar ah u dhiibaan shirkadda (Noor City Development Corp). lacagtaas oo damaanad u noqonaysa in mashuucu uusan dib uga dhicin mudada loogu talo galay inuu ku dhamaado oo ah sanadka (2020). shirkadda (Noor City Development Corp) ayaa ah shirkad loo abuuray maamulka iyo hirgelinta dhismaha magaalooyinka mataanaha ah ee "Al Noor Twin Citys Djibouti And Yeman", waxaana madax ka ah nin kuweyti-maraykan ah lana yiraahdo mudane (Eng.Tariq E. Ayyad) Sawirka buundada hada dunida ugu dheer waxaa la yiraahdaa (Donghai Bridge) waxayna ku taalaa dalka shiinah, buundadaas oo u dherer keedu yahay (20.2 ML) halka (Tarek bin Laden bridge) oo marka la ebyo noqonaysa buundada 2-aad ee dunida ugu dheer, uu dherer keedu yahay (29 km (18 ML). Magaalada "Al Noor Twin Citys1" ee laga dhisayo daanta xeebta jabouti ayaa waxaa qorshuhu yahay 5 sano ka dib marka uu mashruucu dhamaado 2020, in ay magaaladu noqoto magaalo degsiimo u ah 2.5 malyuun oo dad ah. halka magaalada ku mataanaysan ee laga dhisayo daanta yeman lagu odorosay in ay degaan u noqon doonto xalqi 4.5 malyuun oo qof ah. magaaladu waxay kaloo yeelanaysaa wado gaadiid oo labada dhinac middiiba ay ku yaalaan lix jid oo isfeer yaala. iyo wado tareen casri ah loogu talogalay oo labada dhinac ka marta. waxaa kaloo suurtogal u noqonaysa shucuubta islaamka ah ee qaaradda afrika ku nool in ay socdaal dhulka ah ku tagaan arada barakaysan ee (Maka) iyo (Madiina). Gunaanad:- Hadaad isha marisid kutubta caalamka loogu aqriska badanyahay, oo ay qoreen tobanka qoraa ee lagu tiriyo in ay yihiin qoreyaashii ugu waaweynaa ee soomaray dunida sadexdii boqol ee ina dhaafay. aadna dhuuxdid aaraadoodii iyo aragtiyadii ay ka haysteen mabaadiida aas-aaska u ah horumarka bulshooyinka. waxaa kuu cadaanaysa oo ad cintiqaadaysaa in umadaha saadaasha wanaagsan dhanka wanaagsanna wax ka fiiriya ay ahaan jireen dad aayatiin fiican. weligoodbana ay soo dhaxli jireen nolol horumar leh iyo ilbaxnimo horusocodnimo ku salaysan. mashruuca sadex madaxlaha ah ee "Al Noor Twin Citys Djibouti And Yeman" marka uu hirgalo sanadka 2020, marinbiyoodka (Bab al-Mandib) oo ilaa iyo hada loo yaqaan "goobtii ilmada" waxaa la filayaa in ay noqoto meel uu caalamku tujaaro iyo tamashle u soo raadsado. dunida oo dhamina ay u aqoonsan tahay inay tahay albaab laga galo horumarka iyo barwaaqada dadyowga caalamku ay higsanayaan. islamar kaasna ah marin dhuleed ay si sahlan isaga kalagooshaan beecmushtariga iyo aqoonta sancada lamahuraanka u ah hurumarka. macnaha magaca ayaandarada xambaarsan ee (Bab al-Mandib), ayaa markaas wuxuu yeelan doonaa sifaha janada dur-durada nimcada badan leh ee (Al Rayaan). Mudo haatan hilaadii todobo billood laga joogo ayaan waxaan shir kala warqaadasho ah ku kulanay dhawr nin oo raga iskaashatooyinka ku jira ah, meeshii waxaa laysku dhaafsaday aaraa ku saabsan xaaladda mustaqbalka iskaashatooyinka reer Tanadland, nin oday ah oo adigu ragaas 70-ka sano madaxa la galay ah baa arintaas afka u furay. nin kaasi wuxuu ku taliyey in tirada iskaashatooyinka hantiileyaasha reer tanadland la badiyo qaab dhismeed koodana la horumariyo, si saamileyda loogu dhiiri geliyo in ay iskaashatooyinka koox-koox u galaan, wuxuu nin kaasi ku taliyey oo kale in iskaashatooyinku sicirka saamigooda ay qiimodhimis door ah u sameeyaan saami-doonka koox kooxda ah. wuxuuna nin kaasi tusaale fiican oo kudayasho leh u soo qaatay shirkadda (Somgluf Group). nin kaasi wuxuu kaloo saadaaliyey in ifafaalaha muuqda darteetd ay iskaashatooyinka reer tanadland ay tayo ahaan iyo tiro ahaanba ay kobci doonaan. mudo 2 sanadood gudahood ahna ay gaari karaan iskaashatooyinka hantiileyaasha reer Tanadland 17 ilaa 20 shirkaddood. nin kaasi odoroskiisa wuxuu ku saleeyey labo arimood. isbedelka cusub ee wacyiga shacabka reer tanadland, cadadka ganacsatada meeldhexaadka ah oo meel sare gaarey iyo sumcadda wanaagsan ee ay u hayaan shacabka reer Tanadland kamid noqoshaha iskaashatooyinka. Nin kaasi wuxuu intaas raacshey, marka midow iskaashatooyin 20 iskaashato ah oo midiiba ay ka koobantahay unugyo iskaashato hoosaadyo la helo. waxaa abuurmaya shirkaddo waaweyn oo mid waliba meherad iyo badeeco gaar ah ay ka mushtarto. sida shirkadda shidaalka, shirkadda sonkorta, shirkadda kabaha, shirkadda shamiitada, shirkadda burka samaysa, shirkad leh suuq badeecadaha muhiimka ah lagula kala wareego "brokerage firm". caaqilku sida uu odorosayna shirkadahaasi waxay yeelan doonaan qaabdhismeed ka adag kana wax tabac badan shirkadaha hada jira. waxaa kale oo muhiim ah dadka reer Tanadland in ay kayd kooda maaliyadeed balaariyaan, marka ugu horaysa ee u kaydkooda dhaqaale gaaro heer wax ku ool ahna ay ku darsadaan shirkadaha gaado'da ah. Indhawaale, waxaa noqotay wax ay laasimeen dadka reer tanadland marka ay iska waraysanayaan danahooda, in ay isweydiiyaan inta ay walaalahood iyo caruurtooda ay jaamacad dibeda ah ugu direen. indhowaale iyadana waxaa socotey in kaydka qurbe jooga reer Tanadland loodiro ururada ardayda reer Tanadland ee dibedaha wax ku barta, si ay xarumo gaar u ah oo ay ku kulmaan ugu gataan. ururka iskuxirka ardayda reer Tanad hawsha uu umaddiisa u qabto waa hawl lawada ogsoonyahay sida ay daruuriga ugutahay umadda Tanadland. ururka iskuxirka ardayda tanadland wuxuu tirakoobaa oo u talo bixin muhiim ah ka siiyaa ardayda, xirfadaha dalku ugu baahida badanyahay ardaydu in ay bartaan. sida culuunta bangiyada iyo maaliyadda, noocyada kala duwan ee naqshadsamaynta "Enginaring" iyo culuunta kala duwan ee daawada. ardayda reer tanadland ee dibadaha wax ku barta bal soomaalidu ha joogtee umadah kale ee ajnabiga ah waa ay ka dadaal badan yihiin. sanad kasta waxaad maqlaysaa gabar ama wiil reer Tanadland ah ayaa jaamacad hebla kaalinta 1-aad ka galay.Falaakiin, ardayda reer Tanadland waa in ay mid ogsoonaadaan. qorshaha qaranka iyo hadaf kasta oo ay umaddatan karaamaysan higsanayso ka guul gaariddooda, dadka laga dhawrayo in ay hormuud ka noqdaan waa iyaga. sidaas lacal adligeed, waxaa la gudboon waajibaad qaranna uu ka saaranyahay in ay bartaan farsamadii iyo aqoontii u sahli lahayd in ay gaarsiiyaan umaddooda horumar deg-deg ah. marka ay iskaashatooyin saamiley ah oo tayo iyo tiroba leh ay abuuraana waxaa looga baahanyahay, in ay ubad kooda u diyaariyaan qorshihii iyo diyaargarowgii ay ku higsan lahaayeen iskaashatooyinka hantiileyaasha aduunka ugu waaweyn. iyaga oo kula tartamaya baaxadda maaliyadda ay maamulaan iyo heerka faa'iidada macaashcelinta oo ay u tabcaan hantiileyaasha iskaashatada maalgeliyey, oo ah maalgeliyeyaasha ay hantidooda ku shaqeeyaan. jiilka labaad ee maareeyeyaasha iskaashatooyinka hantiileyaasha reer Tanadland, waxaa laga filayaaa waa inay isku dherershaan shirkadaha lamidka ah kuwa hoos ku qoran oo shirkadaha gaado'da caalamka ugu waaweyn.Largest Hedge Fund Managers of the world in 2010 ($-Billion) "26 -Ka Shirkaddood Ee Shirkadaha Hantiileyaasha Gado'da Ah Oo Dunida Hantida Ugu Badan Maamula.1 J.P. Morgan $ 53.5 billion2 Bridgewater Associates $ 43.6 billion3 Paulson & Co. $ 32.0 billion4 Brevan Howard $ 27.05 Soros Fund Mgmt. $ 27.0 billion6 Man Group $ 25.3 billion7 Och-Ziff Capital Mgmt. Group $ 23.1 billion8 D.E. Shaw Group $ 23.0 billion9 BlackRock (BGI) $ 21.0 billion10 Farallon Capital Mgmt. $ 20.7 billion11 Baupost Group $ 20.0 billion12 King Street Capital $ 19.0 billion13 Goldman Sachs Asset Mgmt. $ 17.8 billion14 BlueCrest Capital Mgmt. $ 17.3 billion15 Canyon Partners $ 17.0 billion16 Elliott Management $ 16.2 billion17 Landsdowne Partners $ 15.0 billion18 Renaissance Technologies $ 15.0 billion19 Fortress Investment Group $ 13.8 billion20 Eton Park Capital Mgmt. $ 13.0billion21 Moore Capital Mgmt. $ 12.4 billion22 Viking Global Investors $ 12.4 billion23 SAC Capital Partners $ 12.0billion24 GLG Partners $ 11.5 billion25 York Capital Management $ 11.1billion26 Tudor Investment $ 10.0 billionTotal $ 177.0Source: Pension & Investment. Waraysi uu waraystay weriyaha Somalitalk.com uga soo warama dalaka Jabuuti weriye [Maxamed Macallin Cismaan "All-man"], (Gudoomiyaha Gudiga Hantiileyaasha Shirkadda Xawaalada Tawakal Express) mudane (Cabdulaahi Yuusuf Muuse "Indhocaad"). Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umada Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, BY: Saxardiid Xareed Bulxan. src="http://somalitalkradio.com/cod/indhocaad3.mp3http://somalitalkradio.com/cod/indhocaad3.mp3"